Shiinaha Custom Daabacan Film caaga Rolls Daabacaadda for factory xirxiraan Auto iyo saarayaasha | Hong Bang
Custom Daabacan caaga Film Rolls Daabacaadda for xirxirashada Auto
HONGBANG waxay macaamiisha ku baahisay Yurub iyo Ameerika muddo ka badan 20 sano u qaybisay caado tayo sare leh oo daabacan duubista wax soo saarka filimka balaastigga ah. Waxay bixisaa noocyo kala duwan oo balaaran oo caag ah oo dahaaranaya filim. Badeecooyinka filimka badankood waxaa loo isticmaalaa codsiyada baakadaha cuntada inta soo hartayna waxay aadaan codsiyo gaar ah.
Waxaan u siineynaa xalal dalabyo duurjoog ah oo codsiyo filim ah. Tirada qaabeynta suurtagalka ah ee filimkeena lakabyada badan ka muuqan ma ahan mid aan xad lahayn. Haddii aad u baahan tahay baakad loogu talagalay noocaaga cuntada la qaboojiyey, ama cunno kulul oo horay loo sii buuxiyey, waxaan kuu soo bandhigi karnaa xalka saxda ah. Waxaan awoodnaa inaan la kulanno shuruudaha guryaha ee ugu adag ee looga baahan yahay kuleylka, iftiinka, ogsijiinka iyo hawada, qoyaanka iyo budada.
Filimadeena caqabadaha ayaa waxaa ka mid ah CPP, PET, EVOH, PP la aqoonsan yahay, bireed, TOPP, VMPET. Shuruudo gaar ah, sida baakadaha otomaatiga ah, waxaan siino super sealing iyo termoforming films. Filimkeena 7 lakab ee Nylon / PE wuxuu hogaamiye u ahaa qiimaha Yurub iyo Ameerika ama filimada xannibaadda ayaa la ansixiyay FDA.
Astaamaha iyo xulashooyinka
Isku-duubnaanta iyo duubista lakabka duuban
Duub poly duudduuban
Filimka Roll waa naqshad gaar ah oo loogu talagalay khadka warshad. Waxaan ku waafajin karnaa saldhigga filimka baahidaada, waxay noqon kartaa aluminium aluminium ah, filimka BOPA / NYLON, filimka ALOX, filimka SIOX, Polyester, BOPP iwm. Sidoo kale, waxay ka socon kartaa hal illaa dhowr lakab oo waxay ku dhammaan kartaa Matt ama muuqaal dhalaalaya .
Waxaan kuu siineynaa xalal codsiyada duurjoogta ah ee duurjoogta ah. Noo sheeg shuruudahaaga waxaan buuxin doonaa dhammaan noocyada baahiyahaaga. Ma horumarinayno alaabada oo waxaan isku dayeynaa inaanu kuu kaxeyno dhankooda; Waxaan dhegeysaneynaa baahiyahaaga iyo injineernimada hal-abuurka ah ee xallin doona caqabadahaaga baakadaha.
Hore: Custom daabacay caaga Poly Film Roll
Xiga: Baakadaha wejiga lagu xirto ee bacda balaastigga ah
Boorsooyinka caaga ah
Daabacaadda Dambiisha caaga
Baakadaha wejiga lagu xirto ee bacda balaastigga ah